TOKANTRANO VAOVAO : Nifanaiky ho eny mandrakizay i Aina sy Tatianà ny Sabotsy lasa teo
“Fo mitambatra ho iray”, niaraka tamin’ireo hira masina, maneho fitiavana maro isan-karazany no nofidian’i Aina sy Tatianà nandravahana ny fanamasinana ny fanambadian’izy ireo. 14 avril 2018
I Tatianà izay iray amin’ireo mpanao gazety eto amin’ny gazety InoVaovao Faritra mikirakira ny vaovao mikasika ny trangam-piarahamonina sy ny sosialy.
Ny sabotsy 31 marsa lasa teo no tontosa tao amin’ny lapan’ny tanànan’ny Kaominina Bemasoandro-Itaosy ny fisoratam-panambadian’i Aina sy Tatianà. Taorian’io kosa no nanaovana ny famasinana sy ny fitsofan-dranon’ny fanambadian’izy roa tao amin’ny Fjkm Andriamahavola-Ambohidrapeto. Manga kely noravahan’ny loko mangirana kosa no loko nosafidian’izy ireo hampiavaka izany andro manan-tantara sy tsy manam-paharoa eo amin’ny fiainan’izy ireo izany.
Tonga eo amin’ny laharan’ny fanambadiana izy roa rehefa nifankalala sy nifamantatra tao anatin’ny taona maro nifandimby izay nifangaroharoan’ny mamy sy ny mangidy, ny mahafinaritra sy ny nanahirana dia tafita soa aman-tsara amin’izao dingana izao satria nifanaiky hofatoran’ny Fitiavana. Noporofoin’izy ireo teo anatrehan’Andriamanitra, ny fianakaviana, ny namana sy tapaka izany ary tsy hadino ny mpiara-miasa. Rehefa vita izany fomba ara-panjakana sy fomba kristianina izany dia nisy ny fiaraha-mifety tao amin’ny trano fanaovan-danonana, Bella Vista Antanimenakely- Itaosy.
Nafana tokoa izany fiarahana izany ka nalai-nisaraka tamin’ireto mpivady vao ny rehetra. Rehefa harivariva ny andro dia nisy ny fanapahana ny mofomamy niarahan’izy mivady ary nifampizarana tamin’ny rehetra tonga nanome voninahitra ny fankalazana ny fanambadian’izy ireo. Izahay mpiara-miasa rehetra eto amin’ny Gazety Ino Vaovao Faritra, dia maneho ny firarian-tsoa ho ho an’i Aina sy Tatianà Mirary tokantrano anjakan’ny fifankatiavana sy fiadanana ho azy mivady.
Maharetà hatramin’ny farany ianareo, ho tokantrano irian’olona fa tsy haniry olona ary ho arahin-jazalahy sy zazavavy.
Mitady ho very an-javony ny raharaha Mbola Rajaonah, Rolly, Fidèle FANAKORONTANANA FILAMINAM-BAHOAKA (295) 14 janvier 2019 Halefa eny amin’ny Fitsarana amin’izay ny dosien’i Mbola Rajaonah TALE JENERALIN’NY BIANCO (170) 17 janvier 2019 Nanamafy ny fanovana goavana hoentiny ny Filoha Rajoelina FANDRAISANA NY FITANTANANA NY FIRENENA (76) 20 janvier 2019 Tafakatra sivy ireo olona namoy ny ainy MAHAMASINA - FIHOTSAHANA TRANO (67) 20 janvier 2019 Rangahy iray 64 taona maty notetitetehina TSARAVANJA - ANTETEZAMBARO (52) 20 janvier 2019 Nahitana ombivavy bevohoka novonoin’olona AMPITOLOVA BELOBAKA MAHAJANGA (50) 20 janvier 2019